MAY NY ENDIM-BOANJO : Mamoaka vahaolana vonjy tavan’andro ny fanjakana | NewsMada
Mijery fa tsy mahita, rehefa kenda vao domy aho ranoatra ! Andro maromaro aty aorian’ny fiakaran’ny vidim-bary, niakatra ny vidin-tsolika, nanara-dia an’izay ihany koa ny saran-dàlana. Omaly vao mody nanao filan-kevitry ny governemanta nandinihina izany ny fanjakana. Rehefa an-dohalika ny ranom-bary, nahita vahaolana tampoka nahafahana namoaka volabe ny fanjakana, maninona anefa tsy nampiharina hatramin’izay ?…
Vidim-bary, 1300 ariary lasa 2200 ariary, vidin’ny solika niakatra 120 ariary sy 160 ariary, saran-dalana lasa 500 ariary… Manoloana izany, nisy ny filan-kevitry ny governemanta « manokana » nandinihina ny mikasika ny fiakaran’ny vidin-tsolika izay notanterahina tetsy amin’ny Lapan’i Mahazoarivo omaly maraina. Tapaka tamin’izany fa hisy ny vola ho fanampiana ho fanonerana ny vidin-tsolika ho an’ireo taksibe miisa 6.305, miparitaka ao amin’ny kaoperativa miisa 156. Ao anatin’ity fanapahan-kevitra ity, misy ny fandrahonana ho an’ireo izay mampiakatra ny saran-dàlana ho 500 ariary fa tsy hahazo io fanampiana io izy ireo.
Araka izany, rehefa ao anatin’ny olana goavana tahaka izao vao miseho mitady vahaolana ny eo anivon’ny governemanta. Niakatra ny vidim-bary, tsy nasiana filan-kevitry ny governemanta manokana nefa iza no Malagasy tsy mihinam-bary ? firy amin’ny Malagasy anefa no mampiasa taksibe ? Ity farany izay ny an-drenivohitra ihany no ahitana azy. Tsy aharitra anefa ity vahaolana noraisin’ny governemanta ity fa ny fanonerana tamin’ny volana novambra sy desambra 2016 ihany no aloa manomboka amin’ny 4 febroary ho avy izao. Tsy voaresaka ao anatin’ity filan-kevitry governemanta ity ny fitohizan’ity fanampiana ity. Araka izany, vonjy tavan’andro ity fanapahan-kevitra noraisin’izy ireo ity.
Fikoropahana tsotra izao fotsiny ity fandraisana fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta omaly ity. « Baiko no nomena amin’ny famoahana ny vola fanampiana mifandraika amin’ny fanapahan-kevitra izay nifanarahana tamin’ny mpitatitra tamin’ny volana oktobra 2016 », hoy ihany ny tatitry ny filan-kevitry ny governemanta. Mbola tsy avy hatrany dia mivoaka ity vola ity araka ny efa voalaza fa mbola amin’ny faha-4 febroary. Raha tsiahivina, « baiko » ihany koa no nomen’ny praiminisitra amin’ny hanatsaharana ny delestazy saingy mbola tsy nijanona izany hatramin’izao.
Tokony hanaovana filan-kevitry ny governemanta manokana tahaka izao avokoa araka izany ary amoahana « baiko » avokoa ireo olana mianjady amin’ny Malagasy, amoahana baiko sy volabe ny fampidinana ny vidim-bary, ny fanafoanana ny fahatapahan-jiro sns…
Araka ny fanambaran’ny filohan’ny UCTU, Andriambinintsolomora Bernardin, fa fanaraha-maso fotsiny no ataon’ny ATT fa tsy mandatsaka ny sazy. Ny andraikitr’izy ireo dia manelanelana ny kaoperativa sy ny fanjakana. Araka izany, raha ny fanamarihan’ny teo anivon’ny UCTU, tsy misy vahaolana afa-tsy ny fampiakarana ny saran-dàlana manoloana ny fiakaran’ny vidin’ny solika.